Tuesday July 21, 2020 - 20:52:33 in Wararka by Liibaan Jeexoow
War rasmi ah oo kasoo baxay dowladda Xabashida Itoobiya ayaa lagu sheegay in lasoo gaba gabeeyay biya buuxinta biya xireenka weyn ee Al Nahda kaas oo dhismihiisa uu murun badan hareeyay.
Abiy Axmed R/wasaaraha Itoobiya oo khudbad ka jeedinayay telefeshinka afka dowladda ku hadla ayaa sheegay in la buuxiyay waaskooyinka biyaha ee Al Nahda balse wuxuu sabab uga dhigay roobab mahiigaan ah oo da'ayay maalmihii lasoo dhaafay.
Itoobiya ayaa dafirtay in iyadu ay si ulakac ah ubuuxisay waaskooyinka biyaha arrinkaas oo ay ku doonayso in ay ku jiha wareeriso ra'yul caamka dowladaha Masar iyo Suudaan oo uu khilaaf ba'an kala dhaxeeyo.
Isbuucii lasoo dhaafay ayay xukuumadda Addis Ababa ku dhawaaqday in ay bilaawday biya buuxinta biya xireenka balse mardambe ayay go'aankaas ka laabatay xilli wadahadallo xasaasi ah socdeen.
Biya xireenka ay dowladda Itoobiya ka dhisayso halka uu ka burqado wabiga Niil ayaa ah midka ugu weyn qaaradda Afrika wuxuuna aad usaameyn doonaa wadanka Masar oo 90% biyaha laga cabo ay ku tiirsanyihiin webiga Niilka buluugga ah.